နှစ်သင်းလုံးရဲ့ လက်ရှိပုံစံကောင်းတွေကြောင့် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
21 Oct 2018 . 6:06 PM
မီလန်ဒါဘီဆိုတာ အရင်ကပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိတဲ့ ပွဲစဉ်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စီးရီးအေရဲ့ ပုံရိပ်ကျဆင်းမှု ၊ မီလန်(၂)သင်းရဲ့ကျဆင်းမှုတွေကြောင့် အရှိန်အ၀ါကင်းမဲ့လာပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမီလန်(၂)သင်းရဲ့ ကစားသမားပိုင်းတောင့်တင်းလာခဲ့တာ ၊ ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်လာခဲ့တာတွေကြောင့် စီးရီးအေပွဲစဉ်(၉)ရဲ့ မီလန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာတော့ ဘယ်အသင်းအသာရသွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
အင်တာမီလန် – အေစီမီလန် ( တနင်္လာမနက် ၁း၀၀ နာရီ )
လက်ရှိ(၂)သင်းလုံးရဲ့ ခြေစွမ်းဟာ အကောင်းဆုံးမှာရိ်ှနေပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး(၆)ပွဲဆက် အနိုင်ကစားထားပါတယ်။ အေစီမီလန်အသင်းကတော့ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး (၈)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပြီး (၅)ပွဲနိုင် ၊ (၃)ပွဲသရေကစားထားပါတယ်။ လက်ရှိ(၂)သင်းလုံးရဲ့ အနေအထားတွေကြောင့် ဒီပွဲမှာဘယ်အသင်းအသာရသွားမလဲဆိုတာ မှန်းဆရခက်ခဲနေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ နည်းပြစပယ်လက်တီ Spalletti နဲ့ နည်းပြဂတ်တူဆို Gattuso တို့ရဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းအားပြိုင်မှုတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေသလို အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူးတွေဖြစ်တဲ့ အီကာဒီ Icardi နဲ့ ဟီဂွါအင် Higuaín တို့ဘယ်သူက ဒီပွဲမှာ အသာရသွားမလဲဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဒီပွဲဟာ တစ်သင်းနဲ့ တစ်သင်းအမှားစောင့်ကစားတဲ့ပွဲ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး (၂)သင်းလုံးရဲ့ကစားပုံကြောင့် သွင်းဂိုးနည်းဖို့ရှိပါတယ်။ အနိုင်ရလဒ်ထွက်ပေါ်လာဖို့ထက် သရေကျဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတဲ့ ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီး အင်တာမီလန် ( ၁ – ၁ ) အေစီမီလန်ရလဒ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အင်တာမီလန် – အေစီမီလန် ပြိုင်ပွဲစုံထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု နောက်ဆုံး(၅)ကြိမ်
Milan0–0Internazionale
Milan E 1 –0Internazionale
Internazionale3–2Milan
Internazionale2–2Milan
Milan2–2Internazionale
– အင်တာမီလန် နဲ့ အေစီမီလန်တို့ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက်ပွဲပေါင်း (၂၂၁)ပွဲကစားခဲ့ကြပြီး အင်တာမီလန်က (၇၈)ပွဲနိုင် ၊ အေစီမီလန်က (၇၆)ပွဲနိုင် ၊ (၆၇)ပွဲသရေ ကျထားပါတယ်။
– အင်တာမီလန်ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက်မီလန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ သွင်းဂိုး(၂၉၉)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး အေစီမီလန်အသင်းကတော့ သွင်းဂိုး(၂၉၇)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
– မီလန်ဒါဘီသမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးသွင်းအများဆုံးတိုက်စစ်မှူးကတော့ အေစီမီလန်တိုက်စစ်မှူး ရှက်ဗ်ချင်ကို Shevchenko ဖြစ်ပြီး (၁၄)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
– အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး အီကာဒီဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုး(၅)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဟီဂွါအင်ကတော့ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းအတွက် လက်ရှိအချိန်ထိ ပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုး(၆)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
– အေစီမီလန်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး(၃)ပွဲမှာ (၁)ပွဲကိုအနိမ့်ဆုံး (၃)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
– (၂)သင်းလုံးဟာ လက်ရှိမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာကင်းစင်နေပါတယ်။
မီလန်(၂)သင်းရဲ့ ဆုဖလားရရှိမှု အခြေအနေ
Trophies Internazionale Milan
Serie A 18 18
Champions League37
Coppa Italia75
Europa League30
Super Cup57
UEFA Super Cup05
Inter Continental Cup23
Serie B02
UEFA Cup Winners’ Cup02
Photo: International Champions Cup , Goal.com , SempreMilan
မီလနျဒါဘီဆိုတာ အရငျက ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျပွီး ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ ပှဲစဉျပါ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ စီးရီးအရေဲ့ ပုံရိပျကဆြငျးမှု ၊ မီလနျ(၂)သငျးရဲ့ကဆြငျးမှုတှကွေောငျ့ အရှိနျအဝါကငျးမဲ့လာပွီး ပရိသတျစိတျဝငျစားမှုလြော့ကခြဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျရှိမီလနျ(၂)သငျးရဲ့ ကစားသမားပိုငျးတောငျ့တငျးလာခဲ့တာ ၊ ခွစှေမျးပိုငျးတိုးတကျလာခဲ့တာတှကွေောငျ့ စီးရီးအပှေဲစဉျ(၉)ရဲ့ မီလနျဒါဘီပှဲစဉျမှာတော့ ဘယျအသငျးအသာရသှားမလဲဆိုတာစိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနပေါတယျ။
အငျတာမီလနျ – အစေီမီလနျ ( တနင်ျလာမနကျ ၁း၀၀ နာရီ )
လကျရှိ(၂)သငျးလုံးရဲ့ ခွစှေမျးဟာ အကောငျးဆုံးမှာရှိနပေါတယျ။ အငျတာမီလနျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး(၆)ပှဲဆကျ အနိုငျကစားထားပါတယျ။ အစေီမီလနျအသငျးကတော့ ပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး (၈)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိကစားထားပွီး (၅)ပှဲနိုငျ ၊ (၃)ပှဲသရကေစားထားပါတယျ။ လကျရှိ(၂)သငျးလုံးရဲ့ အနအေထားတှကွေောငျ့ ဒီပှဲမှာဘယျအသငျးအသာရသှားမလဲဆိုတာ မှနျးဆရခကျခဲနတောကတော့ အမှနျပါပဲ။ နညျးပွစပယျလကျတီ Spalletti နဲ့ နညျးပွဂတျတူဆို Gattuso တို့ရဲ့ နညျးဗြူဟာပိုငျးအားပွိုငျမှုတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ရှိနသေလို အာဂငျြတီးနားတိုကျစဈမှူးတှဖွေဈတဲ့ အီကာဒီ Icardi နဲ့ ဟီဂှါအငျ Higuaín တို့ဘယျသူက ဒီပှဲမှာ အသာရသှားမလဲဆိုတာကလညျး စိတျဝငျစားစရာပါ။ ဒီပှဲဟာ တဈသငျးနဲ့ တဈသငျးအမှားစောငျ့ကစားတဲ့ပှဲ ဖွဈလာနိုငျပွီး (၂)သငျးလုံးရဲ့ကစားပုံကွောငျ့ သှငျးဂိုးနညျးဖို့ရှိပါတယျ။ အနိုငျရလဒျထှကျပျေါလာဖို့ထကျ သရကေဖြို့ ရာခိုငျနှုနျးပိုမြားတဲ့ ပှဲမြိုးဖွဈပွီး အငျတာမီလနျ ( ၁ – ၁ ) အစေီမီလနျရလဒျမြိုးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
အငျတာမီလနျ – အစေီမီလနျ ပွိုငျပှဲစုံထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှု နောကျဆုံး(၅)ကွိမျ
– အငျတာမီလနျ နဲ့ အစေီမီလနျတို့ဟာ သမိုငျးတဈလြှောကျပှဲပေါငျး (၂၂၁)ပှဲကစားခဲ့ကွပွီး အငျတာမီလနျက (၇၈)ပှဲနိုငျ ၊ အစေီမီလနျက (၇၆)ပှဲနိုငျ ၊ (၆၇)ပှဲသရေ ကထြားပါတယျ။
– အငျတာမီလနျဟာ သမိုငျးတဈလြှောကျမီလနျဒါဘီပှဲစဉျမှာ သှငျးဂိုး(၂၉၉)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး အစေီမီလနျအသငျးကတော့ သှငျးဂိုး(၂၉၇)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
– မီလနျဒါဘီသမိုငျးတဈလြှောကျ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးတိုကျစဈမှူးကတော့ အစေီမီလနျတိုကျစဈမှူး ရှကျဗျခငျြကို Shevchenko ဖွဈပွီး (၁၄)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
– အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူး အီကာဒီဟာ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီမှာ လကျရှိအခြိနျထိ အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံသှငျးဂိုး(၅)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး အစေီမီလနျအသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူး ဟီဂှါအငျကတော့ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီမှာအသငျးအတှကျ လကျရှိအခြိနျထိ ပွိုငျပှဲစုံသှငျးဂိုး(၆)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
– အစေီမီလနျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး(၃)ပှဲမှာ (၁)ပှဲကိုအနိမျ့ဆုံး (၃)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
– (၂)သငျးလုံးဟာ လကျရှိမှာ ဒဏျရာပွဿနာကငျးစငျနပေါတယျ။
မီလနျ(၂)သငျးရဲ့ ဆုဖလားရရှိမှု အခွအေနေ
by Naing Linn .6mins ago